Single toon madow dhaliyay - Shiinaha Shandong Gongxian Gmengyuan
Description of toon madow ka dib loo wareejin dhex bayoteknoolajiyadda, toon madow ka leexin kara protein galay 18 nooc oo ah "acids amino" lagama maarmaanka u ah jirka aadanaha maalin kasta, taas oo si degdeg ah nuugo karaa by jidhka. In the "Barnaamijka Cuntada Designer" warbixin ku saabsan cilmi-baaris ka-hortagga kansarka cuntada dhirta by USNCI fuliyay sida xarunta daraasadda, oo ku saabsan 48 noocyada kala duwan ee cuntada wax ku ool ah ku qoran yihiin, taas oo ka mid ah "toon" waa labaad ee ma jiro. toon Black inta badan waxaa ku jira 18 acids amino, VITA ...
Description of toon madow
Ka dib markii lagu wareejiyay iyada oo bayoteknoolajiyadda, toon madow ka leexin kara protein galay 18 nooc oo ah "acids amino" lagama maarmaanka u ah jirka aadanaha maalin kasta, taas oo si degdeg ah nuugo karaa by jidhka.
In the "Barnaamijka Cuntada Designer" warbixin ku saabsan cilmi-baaris ka-hortagga kansarka cuntada dhirta by USNCI fuliyay sida xarunta daraasadda, oo ku saabsan 48 noocyada kala duwan ee cuntada wax ku ool ah ku qoran yihiin, taas oo ka mid ah "toon" waa labaad ee ma jiro.
toon Black inta badan waxaa ku jira 18 acids amino, fitamiinada (C, B, A), raad raaco canaasirta (fosfooraska, potassium, magnesium, sodium, calcium, calcium, Silicon, aluminium, zinc, sayliniyam iyo germanium), xeryahooda baaruud iyo carbohydrate.
Waxqabadka dhamaystiran oo toon madow waa 10 jeer ka badan toon caadiga ah; ay awood antioxidant waa 15 jeer ka badan toon caadiga ah.
Tian Koukuan, Japan ayaa khabiir caanka ah ee biology cell kelli oo ah borofisar ka tirsan jaamacadda Mie in uu cilmi baaris uu muujinayaa in awoodda antioxidant toon madow ka mid ah ugu wanaagsan ee in ka badan 300 oo noocyada kala duwan ee cuntada la function antioxidant of duwan.
Saamaynta of toon madow
Anti-bararka: allicin ku jira toon madow waxay leedahay saameyn lid ku ah bakteeriyada.
Anti-buro saamayn: toon Black xannibi karaa ereygu wuxuu ahaa ee ka nitrosamines "kansarka", oo la xakameeyo koritaanka unugyada kansarka, iyo dilo "unugyada kansarka". "Ajoene" (thiosulfate diallyl) waa kiimikaad ahaan xasilloon oo uu leeyahay saamayn inhibitory weyn ku koritaanka unugyada burada kala duwan, gaar ahaan unugyada kansarka.
Si looga hortago cudurka cardiocerebrovascular: naanaysta kale ee "toon madow" siiyey by saynisyahano waa "gabacsatada dhiig."
Si kor loogu qaado koritaanka timaha: The saliidaha kacsan oo toon madow dardar kartaa jihada socodka dhiigga (qanjirka Qanjirrada) iyo socodka follicle timaha, sidaas kor u qaadida koritaanka timaha. Waa maxay more, waxaa kale oo uu leeyahay saamayn ku daweeya u goynina,
Si kor loogu qaado shaqo difaaca: tijaabo Animal muujinaya in saliidda xaydha-L kacsan ee "toon madow" si weyn u hagaajin karaa shaqada phagocytic ah "qorayo" iyo kor loogu qaado habka difaaca jirka.
Si kor loogu qaado koritaanka sirdoonka: canaasiirta "toon madow" iyo vitamin B1 ee jirka aadanaha saari karaan "abahaaga toon", iyo "abahaaga toon" kor u qaadi kartaa oo kicin shaqo vitamin-B1, kor loogu qaado saamaynta qayilo carbohydrate iyo siiyaan tamar ku filan unugyada maskaxda si ay u ilaaliyaan fikir si dhakhso ah.
saamaynta nafaqada: toon uu qiimo aad u dheer nafaqo, iyo dhammaan nafaqooyinka uu lagama maarmaan u ah jidhka bini'aadamka.
Si loo ilaaliyo beerka: toon Black ayaa hawl aad u xoog badan antioxidant. Waxaa la xakameeyo kartaa "perodoxida la egyahay" dhaawac on dhismeedka xuub gacanta beerka iyo ilaalinta beerka.
Si nidaaminaya heerka sonkorta dhiigga: toon madow waxay leedahay saamayn weyn ku xakamayn sonkorta dhiigga.
toon Black waxa uu yarayn karaa halista ah ee kansarka qanjirka 'prostate': germanium iyo selenium, xeryahooda baaruud iyo xubno macdanta ee toon madow.
hababka la cuni karo
Waxaad qaadan kartaa 2-3 xabbadood maalintii. First aad dhil kartaa toonta, ka dibna waxa ay si toos ah u cunaan. toon Black sidoo kale ka dhigi kartaa suxuunta iyo shaaha, marka la natiijo ka wanaagsan isku qasan. Dadka qaba kulaylka gudaha sare waxa lagula talinayaa in ay qaataan mid ka mid ah maalin kasta. Dadka qaba kansarka dhiigga iyo astaamo la xidhiidha cudurrada xinjirowga laguma talinayo in la cuno.
toon Black ku jira noocyo kala duwan oo xubno ka raad iyo fitamiinada in baahida jirka aadanaha. Waxaa kor u qaadi kara polyphenols iyo siin caws waxqabadka aadanaha, iyo waxa uu leeyahay 18 nooc oo acids amino.
dadkii badnaa ku haboon
Dadka ay dhibaatadu ka ama bukaanka qaba: dhiig la'aan, birta iyo yaraanta calcium, wadnaha iyo cerebrovascular; hyp
Next: multi dhaliyay - qayb ubax toon madow
Warbixiinta Garlic Da'da ah
Shiinaha Garlic Factory
Heerarka Garlic Shiinaha
Shiinaha Solo Garlic
Khamiirinta Box Black Garlic
Miiro Black Garlic-Liquid
Fresh White Garlic qeybiye
Garlic lagu niinaaso
Good Cuntada Black Garlic
Sale Hot Black Garlic
Dabiiciga ah si cajiib leh Black Garlic
Bixi Warbixiinta Best Black Garlic
Red Garlic Maqaarka
Qeybiye Vietnam Black Garlic
budo toon Black
toon la shiiday Black
toon madow qasacadeysan
multi dhaliyay - qayb ubax toon madow